Maa amụma? Vetikal Vertical abụghị naanị Mainstream, ọ na-arụ ọrụ karị | Martech Zone
Naanị afọ ole na ole gara aga, otu onye ọrụ ibe m kwara m emo n'ihu ọha mgbe m na-ekerịta echiche m site na vidiyo. Nsogbu ya na vidiyo m? Anọ m na ekwentị vetikal kama n ’ihu. Ọ jụrụ ọkachamara na nguzo m na ụlọ ọrụ dabere na usoro vidiyo m. Ọ na-ewute ya n'ihi ihe ole na ole:
Vidio niile gbasara ikike ha nwere na-akpali ma na-ekwurịta okwu ozi. Ekwetaghị m na nghazi nwere mmetụta ọ bụla na nke ahụ.
Anyị ikiri ikike enweghị ihe ntanetị, ụmụ mmadụ nwere ike ịnabata ma nwee ọ videoụ vidiyo dị larịị.
Mmekọrịta na ngwaọrụ mkpanaka gafeela nlele vidio desktọọpụ. Ndị ọrụ na-ejide ekwentị ha na ndabara.
Yabụ ọ bụrụ na vidiyo vidio na-enye gị nsogbu, gafere ya. Ugbu a, ka doo anya… Anaghị m akwado gị ọzọ akọwa video ma ọ bụ ọkachamara dere video a ga-eme ekwesị, anyị telivishọn na laptọọpụ ka gbakwasara ịgbatị na ọ bụ oké na-uru nke na iruturu video ezigbo ala na ụlọ.
Ihe omuma a sitere na Breadnbeyond, Ntuzi Kachasị Egwuregwu vidiyo nke Social Media Marketing, na-akọwa akparamàgwà ndị ahịa nke ikiri vidiyo na mgbasa ozi vidiyo na ekwentị. Offọdụ n'ime stats bụ anya-emeghe site na Mediabrix:
Naanị 30% nke ndị na-ekiri vidiyo ga-atụgharị smartphones ha n'akụkụ mgbe ha na-ekiri vidio dị na ntanetị
Ndị ọrụ enyerela vidio vidiyo na ekwentị mkpanaaka na-ele naanị 14% nke mgbasa ozi ahụ
Imirikiti ndị na-ekiri oge na-ele vidio vidio dị elu na-achọgharị bọtịnụ 'X'
N’ụzọ dị iche, egosipụtara mgbasa ozi vidio n’esiri ike pasent 90 nke oge
Ọrụ vidiyo niile na-egwu vidio vidio ugbu a na-akpaghị aka, gụnyere Youtube, Akụkọ Instagram, Akụkọ Facebook, na Snapchat
Yabụ, mgbe isi ikpo okwu na ọkara bụ mobile, vetikal vidiyo abụghị naanị ụkpụrụ… ha dị irè karị!
Tags: Achịcha karịrịakụkọ facebookinfographicinstagram akụkọVidio Ahịamgbasa oziekwentị mkpanaakavideo mkpanakasmartphonesnapchatvetikal videoyoutube